ကမ်းခြေစာမျက်နှာများရှိဗွီဒီယိုများသည်စကားဝိုင်းများကို ၁၃၀% တိုးပွားစေပါသည်။
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 13, 2010 တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 27, 2014 Douglas Karr
ဒီဗီဒီယိုဟာဆွဲဆောင်နိုင်လောက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတချို့ရှိနေပါတယ် ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းတိုးမြှင့် 200% မှ 300% အားဖြင့်အီးမေးလ်များကိုအပေါ်။ ဗီဒီယိုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများအားလုံးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေသည်။ Imavex ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ်ခုဖြစ်သည် ထိပ်တန်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ နိုင်ငံထဲမှာ။
ငါ Ryan Mull နဲ့စကားပြောနေတုန်းသူတို့ဆင်းသက်တဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပါဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖောက်သည်တွေရဲ့ pay-per-click ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသိသိသာသာတိုးတက်လာတာကိုသတိပြုမိကြောင်းသူပြောခဲ့တယ်။
သတင်းကောင်းသည်ဒေတာတော်တော်ရှင်းပါသည်၊ အချက်အလက်အစစ်အမှန်သည်ရလဒ်များကိုပြရန်အလုံအလောက်ကြီးမားသည်။ SEM / PPC ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာသို့ဗွီဒီယိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမှရရှိသောပို့စ်များတွင် ၁၃၀.၅% တိုးလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ရိုင်ယန် Mull, Imavex နှုန်း
Imavex သည်ဗီဒီယို hosting platform ကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။ မိုးဇက်၎င်းတို့သည်ဤအရည်အသွေးမြင့်သောဗီဒီယိုများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်အသုံးပြုနေသည်။
ရောနှောထားသော web-based ဗီဒီယိုများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များသည်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်ရှိသောဗွီဒီယိုများပြုလုပ်နိုင်သည့်ဒေသခံဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုများသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ နှင့်အထက်ကုန်ကျနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများကို ၁၃၀% တိုးမြှင့်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးအမြတ်ကိုနားလည်ရန်များစွာမလုံလောက်ပါ!
14:2010 pm မှာဇွန် 9, 01
အရွယ်အစား၊ ရှုထောင့်အချိုးအစားနှင့်ဆိုက်ပေါ်တွင်နေရာချခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိစေသည်။ မှားသည်၊ ထို့ကြောင့်ငါပြောခဲ့သည်
ဇွန် 14, 2010 မှာ 1: 12 pm တွင်
သင်ဖော်ပြခဲ့သော 'ဒေသခံဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်များ' ကိုမျှဝေနိုင်ပါသလား။ မှန်ကန်တဲ့ရောင်းချသူတွေကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုထပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဇွန် 14, 2010 မှာ 2: 10 pm တွင်
ဝိုး! ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်သူထုတ်လုပ်ခဲ့တာလဲ။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုတွေ့ချင်ပါတယ် တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရမလား။
15:2010 pm မှာဇွန် 10, 49
ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာဗီဒီယိုရင်းမြစ်တွေက Imavex (http://www.imavex.com), သခွားမွှေးသီး (http://www.cantaloupe.tv), နောက်ထပ် Cool ဒီဇိုင်း
ကြယ်ပွင့်မီဒီယာ (http://12starsmedia.com) ဒေသအလိုက် - ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
20:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 50
LaunchSpark Video လို့ခေါ်တဲ့တိုရွန်တိုအခြေစိုက်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုအေဂျင်စီအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးရုံသာမကဘဲ၊ သူတို့ရဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ ဦး ဆောင်မှုနည်းဗျူဟာအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည်သူတို့၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယိုများကိုကုန်စည်ပြပွဲများနှင့်တင်ဆက်မှုများတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးပရိသတ်များအားသူတို့၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကြည့်ရှုသူများအား ဦး ဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုများကိုချန်နယ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အလွယ်တကူထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းသည်၎င်းကိုဤကဲ့သို့ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
21:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 2, 04